खेल को दरबार (कीव)। परिसर को इतिहास
मात्र होइन बासिन्दा, तर पनि युक्रेनी राजधानी को अतिथि एक जो खेल को महल छ ब्याज विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ। कीव ठूलो मात्रा सुविधाहरु को एक नम्बर घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भवन तिनीहरूलाई को छ। आज यो एक बहु-faceted जटिल छ मात्र उपस्थिति मा फरक, तर पनि उच्च प्रविधी नवाचारै को प्रयोग। यो स्थान भन्दा बढी एक दशक मार्फत भएको छ र अन्ततः आज देख्न सकिन्छ कि फारम लिइरहेको नियमित परिमार्जन, परिवर्तन।
Cherepanova हिल को खुट्टा मा कीव को केन्द्र मा युक्रेनमा एक ल्यान्डमार्क छ जो एक इनडोर सुविधा विशाल र अद्वितीय खेल-हेर्दै छ। खेल परिसर द्वारा वास् ए आई Zavarovym, एमआई Grechina र ईन्जिनियरहरु एस Chudnovsky VI repyah 1958-1960 मा बनाइएको थियो। उत्पादन संरचना को आधार प्रबलित ठोस छ। भवन दुई भन्दा बढी सय हजार वर्ग मीटर को एक क्षेत्र संग चार फर्श मा निर्माण गरिएको छ।
खेल को दरबार (कीव) डिसेम्बर 9, 1960 मा यसको ढोका खुलेको छ। को प्रतियोगिताहरु को रंगशालामा मा, आफ्नो क्षमता 12 हजार मान्छे पुगेको छ। तर भवन पुनर्निर्माण बीस वर्ष पछि गरियो। सुधार प्रकाश र प्राविधिक उपकरण, पूर्ण सहभागीहरू लागि विशेष शौचालय प्रदान र साना क्याफे लागि ठाउँ सिर्जना गरेको छ, यो हल कायापलट। पनि 2004-2005 मा फेरि बाहिर दृश्य सिर्जना संख्या वृद्धि जो जटिल, को पुनर्गठन गरियो।
सुन्दर र विशाल गरिएका खेल महल, कीव यसको भित्ताहरू सबै comers निम्तो दिनुहुन्छ। काम को आफ्नो धेरै वर्ष को लागि, उहाँले बारम्बार विभिन्न प्रतियोगिता, साथै प्रदर्शनियों र मेलों लागि स्थल भयो। त्यहाँ बारेमा पाँच हजार संगीत, पचास प्रतियोगिताहरु, सेमिनार र सम्मेलन, बरफ शो थियो। हामी प्रसिद्ध दुनिया तारा र समूह थिए। 2005 मा यो एक सांगीतिक शो "Eurovision" आयोजित गरिएको थियो र 2009 मा एक बच्चाको प्रतियोगिता अनुरूप संगठित।
अप्रिल 2011 मा, हामी को खेल जटिल को एक छ महिना ब्रेक पछि खोल्ने लागि समारोह आयोजित। यो समयमा त्यहाँ रंगशालामा र लकर कोठा मरम्मत छन्। साथै, नयाँ सिट स्थापित, राष्ट्रिय झण्डा को प्रतीकात्मक रंग, र आधुनिक विद्युतीय scoreboard, एक घन जस्तै आकार छ जो चित्रित गरेका थिए। यो रंगशालामा मा भइरहेको कुनै पनि खेल घटनाहरू र संगीत प्रसारण गर्न सक्षम छन् कि चार प्लाज्मा स्क्रीन बनेको छ। अब दर्शक थप सहज भएको छ, तिनीहरूले खेल को महल (कीव) भ्रमण थप खुशी प्राप्त। जो तपाईं मात्र अलिकति पनि वैभवशाली प्रतिबिम्बित तलको देख्न सक्नुहुन्छ हल, को फोटो।
विशेष ध्यान एक कृति हो जो रंगशालामा, को चरण दिइएको छ। यसलाई आफ्नो आयताकार आकृति अनुपम छ। यो पाहुनाहरूलाई सबै राम्रो जाँदै कहीं rostrum संग हेर्न अनुमति दिन्छ। दृश्य पछाडि केन्द्रीय हल, जहाँ rehearsals लागि ठाउँ धेरै, साथै काम खानपान बाहिर कलाकारहरूको लागि लगे छ। को लकर कोठा शवर केबिन धुलाई, शौचालय र मालिश टेबल र एक दराज संग सुसज्जित छन्। तिनीहरूलाई सजिलै राख्दै सहज लाउने कोठा, आवश्यक भएमा जहाँ तपाईं ऐना र विशेष फर्नीचर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ रूपान्तरित छन्।
उप स्वागत क्षेत्र र अतिथि सत्कारमा
कुनै संगीत र प्रतियोगिताहरु लबी क्षेत्र, दुई तल्लाहरु मा स्थित छ जो भर हुँदा, विभिन्न प्रदर्शनियों र घोडे आयोजित। पहिलो तल्ला स्वागत क्षेत्र - एघार पदहरू को मुख्य गेट छ। साथै, त्यहाँ वीआईपी-व्यक्तिका लागि छुट्टै चार आदानों छन्। एक पैदल-मा हजार दस मान्छे को लागि खानपानको प्रबन्ध गर्नु गर्न सक्षम छन् जो closets पनि छ। भित्र आउँदै अतिथिहरूको, विद्युतीय टिकट लागि नयाँ नियन्त्रण प्रणाली पास। आयोजकहरु लागि यो पर्यटकहरू संख्या गणना गर्न धेरै सुविधाजनक छ। आतिथ्य को दोस्रो तल्ला मा रंगशालामा क्षेत्र वटा entrances र अधिक पन्ध्र बुफेट्स छ। त्यहाँ प्रदर्शनियों, साथै मा जमीन पनि छन्। इलाका नियमित प्रस्तुति उपस्थित मा, तपाईं फिलिम सेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
संग्रहालय "खेल महल" (कीव)
त्यहाँ एक इतिहास संग्रहालय, आगंतुकों सय तीन भन्दा बढी टुक्रा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ थियो जहाँ जटिल, को उद्घाटन देखि लगभग पचास वर्ष पछि। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसलाई पछिल्लो एक टुक्रा देखाउँछ कि रोचक छ।
यहाँ तपाईँले निर्माण को प्रगति वर्णन दस्तावेज एक किसिम देख्न सक्छौं। तपाईं, खेल को महल, कीव गर्व छ जब दिनमा एक स्नान लिन पहिलो यसको ढोका खोल्न सक्छ। यो सबै कि स्मरणीय घटना बाट फोटो सम्भव धन्यवाद छ। साथै, यहाँ प्रमाणपत्रहरू, ट्राफियों को एक किसिम संकलित। वर्षौंदेखि क्षेत्र कामदारहरूको अब सबै comers पहुँच योग्य यादगार, संकलित।
कोठा र ठेगाना को योजना
वर्षौंदेखि परिसर दर्शक संग एक दृश्य सहित धेरै पटक परिवर्तन भएको थियो। यस क्षेत्रमा हाल विकासक्रम को आगंतुकों लागि र सहभागीहरू लागि सबैभन्दा सहज अवस्था सिर्जना गर्न मदत गरे। घटनाहरु, संगीत, शो, कार्यक्रम को लागि एक स्थल - खेल को सबै यो महल, कीव। कोठा को योजना कुनै पनि ठाउँबाट राम्रो दृश्य प्रदान यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ। दर्शक मञ्चमा भइरहेको छ के को कुनै पनि विस्तार सम्झना छैन।
खेल को महल (कीव) भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्। यो जटिल ठेगाना: खेल क्षेत्र, 1 गर्नुभएको भवन हाम्रो आफ्नै आँखाले हेर्न राम्रो छ जो राजधानी, एक हडताली ल्यान्डमार्क छ।
जहाँ मई मा एक छुट्टी लागि जाने? यात्रा सुझाव
जर्मनी मा स्थायी निवास लागि संभावनाहरु र सार्दा को तरिका
फोहराहरू गीत गाउने ... बार्सिलोना ... देश जादू र सपना
क्रास्नोडार मा ग्यास्ट्रो "सेतो खरायो": धेरै स्वादिष्ट र भड्किलो
टर्की, Ölüdeniz: समुद्र तट बिदा, होटल, फोटो र समीक्षा
मैड्रिड को आकर्षण के देख्न पर्छ छन्
Achilles को ढाल के हो?
Phototherapy - यो के हो? नवजात लागि Phototherapy
गिटारको प्रकार: क्लासिकल देखि इलेक्ट्रिक गिटार बाट
कार्यालय प्रबन्धक। काम प्रकार्य
कसरी आदेश रेखाबाट लिनक्स को एक समूह एक प्रयोगकर्ता थप्न?
के सपना मनपर्ने मान्छे? सपना पार्स
चिनियाँ ट्याब्लेटहरू सेन्ट पीटर्सबर्गमा
ओर्थोडक्स क्रिसमस कसरी मनाउने?
कसरी उपयोगी ब्रेडक्रंब? को प्रतिस्थापन र कसरी यो संघटक तयार?